fanaka miforitra handravaka lavarangana tena kely | Bezzia
Maria vazquez | 07/01/2022 18:00 | Haingon-trano fitaka
Nandritra ny fanagadrana, ireo izay afaka nankafy toerana an-kalamanjana tao an-tranonay dia nahatsiaro tena tsara vintana. Na ny lavarangana tena kely lasa harena kely ireny. Ary izany miaraka amin'ny fanaka mivalona Ireo dia mety ho fanitarana ny trano.
Ny lavarangan'ny trano Matetika izy ireo dia kely nefa tsy sakana amin'ny fanararaotana azy ireo. Azonao sary an-tsaina ve ny tenanao amin'ity fisotroana kafe ity amin'ny maraina mandritra ny fahavaratra? Mipetraka amin'ny famakiana hariva? Mankafy sakafo hariva miaraka amin'ny namanao? Azonao atao ny manatanteraka izany amin'ny fametrahana fanaka vitsivitsy.
1 fanaka miforitra
2 Fanaka tena ilaina
3 Atambaro izy ireo amin'ny ...
Ny fanaka miforitra dia safidy tsara handravaka lavarangana kely. Ireo dia tsy mazava, amin'ny ankapobeny, fa mamela antsika koa reconfigure mora foana ny toerana rehefa ilaina. Aforitra dia maka toerana kely dia kely, izay ahafahanao mampiasa ny habaka amin'ny fomba hafa. Saingy tsy ireo ihany no tombony amin'ity karazana fanaka ity araka ny hitanao etsy ambany.
Fanaka maivana izy ireo; kely lanja izy ireo ary maka toerana kely.
Azo aforitra sy angonina mora rehefa mila mampiasa ny habaka amin'ny fomba hafa na manomana azy fotsiny amin'ny ririnina.
Tsy dia lafo izy ireo.
Fanaka tena ilaina
Inona no fanaka miforitra ilaina amin'ny lavarangana? Ny zavatra ilain'ny olona tsirairay na ny fianakaviana tsirairay dia samy hafa, saingy misy fanaka roa izay mahalana no manakana ny lavarangana satria mahatonga azy io ho toerana azo ampiasaina kokoa. Mazava ho azy fa miresaka momba ny latabatra sy seza.
Una latabatra miforitra boribory fanampim-panampiana lalandava izany. Ary… inona no dikan'ny hoe mametraka latabatra tsy misy seza roa farafahakeliny manodidina azy? Ny andiany amin'ity karazana ity dia ahafahanao manao hetsika maro any ivelany: misotro kafe, misakafo, mamaky, miasa ... ary manao izany amin'ny olon-kafa.
Kely ve ny toerana misy anao? Miloka amin'ny a latabatra semicircular izay azonao apetaka amin'ny railing na rindrina ary manolo ny seza amin'ny dabilio amin'ny sisin'ny lavarangana. Mety tsy hipetraka seza roa ianao fa dabilio mahazaka olona roa. Afaka mametraka latabatra mahitsizoro ve ianao? Raha mamela izany ny toerana eo amin'ny lavaranganao ary ny fahafahana misakafo sy misakafo any ivelany no laharam-pahamehana ho anao, aza misalasala!
Miloka amin'ny latabatra sy seza vita amin'ny fitaovana mety amin'ny toerana ivelan'ny trano. Fitaovana manohana tsara Toetrandro ratsy toy ny vy, fibre synthetic na hazo tropikaly toy ny teak.
Atambaro izy ireo amin'ny ...
Un workbench na tsy misy fitahirizana tsy dia be loatra amin'ny lavarangana izy ireo. Eo amin'ny dabilio dia azonao atao ny mametraka olona betsaka kokoa noho ny azonao atao amin'ny seza mitovy toerana amin'ity iray ity. Raha apetanao amin'ny rindrina izany ary asiana tsihy dia azonao atao ihany koa ny miala sasatra amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro.
Laharam-pahamehana ve ny fananana toerana hatoriana sy hialana voly? Avy eo angamba aleonao mametraka sofa ary manadino ny latabatra sy seza raha tsy manana toerana ho an'ny tofo ianao. Miloka amin'ny sofa an-jorony ary fenoy ny set amin'ny latabatra kafe miforitra. Hanampy anao hisotro kafe na hanomana sakafo hariva maivana.
Te-hanatsara kokoa ny habaka ve ianao? Raha tsy tianao ny gorodona eo amin'ny lavaranganao na ratsy ny toe-javatra, maninona raha ampidirina a sehatra misy lamina? Tena mora apetraka izy ireo; kitihina tsotra fotsiny. Ary raha kely dia kely ny lavaranganao, dia tsy hiakatra ny vidiny. Izy ireo dia eo anelanelan'ny € 16 sy € 23 isaky ny metatra toradroa. Ny lamba ihany koa dia hanampy anao amin'ny hafanana.
Ary aza adino mampiditra zavamaniry sasany. Ireo dia mitondra havaozina sy loko eo amin'ny lavarangana. Ary, miankina amin'ny zavamaniry nofidinao sy ny toerana ametrahanao azy ireo, afaka manome anao fiainana manokana manokana aza izy ireo. Miloka amin'ny santionany ambany fikojakojana izay afaka mijanona mandritra ny taona ary tsy manana elany lehibe mba tsy hangalatra toerana be loatra.
Ny fandravahana lavarangana tena kely amin'ny fanaka miforitra dia tena tsotra sy tsy lafo. Jereo ny sasany ary omano ny lavaranganao alohan'ny hahatongavan'ny lohataona mba hanararaotra izany faran'izay haingana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Haingon-trano fitaka » Aforitra fanaka mba handravaka tena kely lavarangana
Fanafody voajanahary 4 hitsaboana aretin'andoha